Uyazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani izikhwama zokulala ekamu langaphandle?
Ungalala kanjani kahle ngesikhathi sekamu lasebusika? Ukulala ngokufudumele? Isikhwama sokulala esifudumele sanele ngempela! Ekugcineni ungathenga isikhwama sokuqala sokulala empilweni yakho. Ngaphezu kwesasasa, ungaqala futhi ukufunda umqondo ofanele wezikhwama zokulala ukuze ufudumale. Uma nje u-y ...
Ungayikhetha kanjani itende langaphandle?
1. Isisindo / isilinganiso sokusebenza Le yipharamitha ebalulekile yemishini yangaphandle. Ngaphansi kokusebenza okufanayo, isisindo silingana ngokulingana nentengo, ngenkathi ukusebenza ngokulingana ngokulingana nesisindo. Kalula nje, ukusebenza okuhle, izindleko zemishini yesisindo esincane ...
Ingabe ama-barbell squats adinga ama-shoulder pads?
Bona abantu abaningi benza ama-barbell squats lapho bedinga ukufaka iphedi elijiyile (iphedi yamahlombe), kubukeka kukhululekile impela. Kepha okuxakayo, kubonakala sengathi ama-novice asanda kuzijwayeza ukucoboshisa asebenzisa amakhushini anjalo. Ochwepheshe bokuqina abavimba amakhulu amakhilogremu we ...
Ungawusebenzisa kanjani umcamelo weyoga
Sekela ukuhlala okulula yize le pose ibizwa ngokuthi ukuhlala okulula, akulula kubantu abaningi abanemizimba eqinile. Uma uyenza isikhathi eside, izokhathaza kakhulu, ngakho-ke sebenzisa umcamelo! indlela yokusebenzisa: -Hlala esicamelweni imilenze yakho iwele ngokwemvelo. -Amadolo avuliwe ...
Ungagcwalisa kanjani amanzi ngokufanelekile, kufaka phakathi inani nenani lamanzi okuphuza, unalo uhlelo?
Ngesikhathi sokuqina, inani lokujuluka lenyuke kakhulu, ikakhulukazi ehlobo elishisayo. Abanye abantu bacabanga ukuthi lapho ujuluka kakhulu, kulahleka amafutha amaningi. Eqinisweni, ukugxila komjuluko ukukusiza ulawule izinkinga zomzimba, ngakho-ke ukujuluka okuningi ...
Ungalisebenzisa kanjani ibhande lokuqeqesha le-TRX? Yimiphi imisipha ongayivocavoca? Ukusetshenziswa kwayo kungaphezu komcabango wakho
Sivame ukubona ibhande lokunwebeka elimisiwe ejimini. Le yi-trx eshiwo esihlokweni sethu, kepha ababaningi abantu abazi ukuthi bangalisebenzisa kanjani leli band nokunwebeka ekuqeqesheni. Eqinisweni, inemisebenzi eminingi. Ake sihlaziye ezimbalwa ngokuningiliziwe. 1.TRX isifuba esifubeni Okokuqala lungiselela ukuma. Senza ...
Imfanelo isiza kanjani impilo yengqondo
Njengamanje, ukuqina kwezwe lethu nakho sekuwumkhakha ocwaningayo oshisayo, futhi ubudlelwano phakathi kokuzivocavoca umzimba nempilo yengqondo nakho sekutholwe kabanzi. Kodwa-ke, ucwaningo lwezwe lethu kule ndawo lusanda kuqala. Ngenxa yokushoda ...
Yikuphi ukukhetha kwama-dumbbells, uzoqonda ngemuva kokufunda le ndatshana
Ama-dumbbells, njengemishini yokuzivocavoca eyaziwa kakhulu, adlala indima ebalulekile ekwakheni, ekwehliseni isisindo, nasekuzuzeni imisipha. Akuvinjelwe indawo, kulula ukuyisebenzisa, kungakhathalekile ukuthi isixuku sinjani, kungabaza yonke imisipha emzimbeni, futhi kube yinto yokuqala yokukhetha iningi le-b ...
Uyini umehluko phakathi kokuzilolongela ekhaya nasejimini?
Kulezi zinsuku, abantu ngokuvamile banezinketho ezimbili zokuqina. Enye ukuya ejimini ukuyozivocavoca, kanti enye ukuzilolongela ekhaya. Eqinisweni, lezi zindlela ezimbili zokufaneleka zinezinzuzo zazo, futhi abantu abaningi baphikisana ngemiphumela yokuqina kwalaba ababili. Kanjalo nawe ...
Uyazi ukuthi yiluphi ulwazi oluhlukile lwe-yoga olungakulethela?
Wake wazizwa wehlukene futhi wehlukanisiwe nomzimba nengqondo yakho? Lokhu kungumuzwa ojwayelekile, ikakhulukazi uma uzizwa ungavikelekile, ungalawuleki, noma uhlukanisiwe, futhi unyaka owedlule awuzange usize ngalutho. Ngifuna ukuvela engqondweni yami futhi ngizwe ukuxhumana ...
Yikuphi okungcono, i-latex resistance band noma i-tpe resistance band?
1. Izici zebhendi lokumelana ne-TPE TPE impahla inokuqina okuhle namandla okuqina, futhi izwakala ikhululekile futhi ibushelelezi. It is extruded ngqo futhi yakhiwa i-extruder, futhi ukucubungula kulula futhi kulula. I-TPE ine-resistanc ephansi kawoyela ...
2021 (39th) I-China Sports Expo ivula kahle eShanghai
NgoMeyi 19, i-2021 (39th) China International Sporting Goods Expo (ngemuva kwalokhu ezobizwa nge-2021 Sports Expo) ivulwe kahle eNational Convention and Exhibition Center (Shanghai) .I-2021 China Sports Expo ihlukaniswe yaba izindawo ezintathu zombukiso ...